လင်းလင်း | Myanmar Mp3 Album | Page 2
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / လင်းလင်း
Category Archives: လင်းလင်း
တန်ဆောင်တိုင် သီချင်း ၂ပုဒ်
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ နီးလာပြီလို့ ကျွန့်တော့်ဆီမှာရှိတဲ့ တန်ဆောင်တိုင်သီချင်းထဲက တချို့ကိုပို့လိုက်တာပါ။ ရိုးရာတေးလေးတွေဖြစ်ပေမယ့် နားထောင်လို့မရိုးနိုင်ပါဘူး။ လုပ်ထားတာလဲ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ လင်းလင်းသီချင်းက အရင် နှစ်ကသီချင်းပါ။ ခွန်နဒီဆိုထားတဲ့ တစ်ပုဒ်ကတော့ ဆိုထားတာမကြာသေးဘူး။ 1. လင်းလင်း – တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် 2. ခွန်နဒီ – တန်ဆောင်တိုင်
October 14, 2010 SONGSLOVER လင်းလင်း ခွန်နဒီ 1 Comment
၀၁။ ဖြစ်သလိုမေ့လိုက်ပါ ၀၂။ စဉ်းစားပါ ၀၃။ ၀င်္ကဘာ ၀၄။ နေတတ်သလို ၀၅။ ခေါက်ရိုးကျိုး ၀၆။ အခုထိပါ ၀၇။ လေတွေတိုက်တိုင်း ၀၈။ တိမ်လိုလူ ၀၉။ အရူးတစ်ပိုင်း ၁၀။ မငြိတွယ်နဲ့ ၁၁။ ရှိပါစေ
November 9, 2008 mgtaryar အခွေ (တကိုယ်တော်) လင်းလင်း New Myanmar Albums 87 Comments